काठमाडौं । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटेको दाबी गरेको छ । नेपाली भूमी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नयाँ नक्सामा भारतले आफ्नो बनाएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला भारतको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता...
भारत सरकारले शनिबार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल–भारतबीच रहेको सीमा विवादको विषय फेरि सतहमा आएको छ। भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा समावेश गरेपछि त्यस व...
November 6, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on १४ करोडकाे राँगाे ! पत्यारै नलाग्ने वजन र खान्की
एजेन्सी । एउटा राँगाे मूल्य कति पर्ला ? सामान्य हिसाब गर्ने हो भने एक डेढ लाख । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको राँगाे त्यति सस्तो छैन । यो त्यस्तो राँगाे हो जसको मूल्य १४ करोड भारु पर्छ । यो भारतको राजस्थानको खबर हो । जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय पशु मेला चलि...
मार्क जुकरबर्ग भन्छन् : फेसबुकका कारण जनताको हातमा सत्ता
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on मार्क जुकरबर्ग भन्छन् : फेसबुकका कारण जनताको हातमा सत्ता
फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले फेसबुकलाई राज्य तथा समाजको पाँचौँ स्तम्भ बताएका छन् । सोसल मिडियाकै कारण आज आम सर्वसाधारण मानिसको हातमा सत्ता पुगेको उनको दाबी छ । आम मानिसहरु सोसल मिडियाकै माध्यमबाट दुनियाभर आफ्ना कुरा ...
भारत मध्य प्रदेशको इन्दौरस्थित एक होटलमा भिषण आगलागी (भिडियो सहित)
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on भारत मध्य प्रदेशको इन्दौरस्थित एक होटलमा भिषण आगलागी (भिडियो सहित)
एजेन्सी । भारतको मध्य प्रदेशस्थित इन्दौरको विजयनगर थाना नजिकैको एक होटलमा भिषण आगलागी भएको छ । गोल्डन होटल नामको उक्त बिल्डिङको आसपास अन्य भवनहरू रहेकाले सुरक्षा सतर्कतालाई विशेष चासो दिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । प्राप्त जानकारी अन...
अस्ट्रेलियामा सबै अखबारको पहिलोपृष्ठ कालो
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on अस्ट्रेलियामा सबै अखबारको पहिलोपृष्ठ कालो
एजेन्सी । अस्ट्रेलियामा सोमबार प्रकाशित सबै पत्रपत्रिकाको पहिलो पाना कालो छापियो । पत्रिकाहरुले सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध गर्दै यस्तो कदम उठाइएको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारको निरङ्कुस कानुन सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनको लागि ...
मकवानपुरमा ४.८ किमी लामो केबलकार निर्माणको तयारी
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on मकवानपुरमा ४.८ किमी लामो केबलकार निर्माणको तयारी
उत्तरी मकवानपुरको पर्यटकीय नगरी थाहा नगरपालिकाले पर्यटकीय क्षेत्र सीमभञ्ज्याङदेखि भीमफेदसीम्म केबलकार चलाउने तयारी गरेको छ । गत मंसिर महिनामा सकिएको सम्भाव्यता अध्ययनबाट सकारात्मक रिपोर्ट आएपछि नगरपालिका अहिले लगानीकर्ताको खोजीमा जुटिरहेको छ । गत आर्...
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on भानुआतुको तटीय क्षेत्रमा ६.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प
सिड्नी । भानुआतुको तटीय क्षेत्रमा सोमबार ६.४ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाले जनाएको छ। स्थानीय समय अनुसार सोमबार अपराह्न २ बजे सो भूकम्प आएको थियो । सो भूकम्प आउनु १२ घण्टा अगाडि भानुआतुको तटीय क्षेत्रबाट ...